“AL-SHABAAB WAXAA NAGA DHEXEEYA XIRIIR ADAG “SH. MUTAFA ABU-ZAYD | Toggaherer's Weblog
Hogaamiyaha Shabakada Al-qaacida ee dalka Afqaanistaan Sheekh Mustafa Abu al-Yazid ayaa sheegay in Iyaga iyo Al-shabaab Al-mujaahidiin uu ka dhexeeyo xiriir qoto dheer, ay yihiina dad walaalo ah isla markaasna uu mideeyo camalka Islaamiga ah ee Jihaadka, Mustafa Abu al-Yazid ayaa sidaan ka yiri maanta Telefishanka Al-jazeera oo kulan khaas ah kula yeelatay meel kamid ah Afqaanistaan.
Amiirka Al-qaacida ee Afqaanistaan Sheekh Mustafa Abu al-Yazid ayaa sheegay in ay u direen Al-Shabaab Al-mujaahidiin xubno iyaga ka socdey kuwaan oo wax badan ku saacidey tababar wanaagsana siiyey, ragaas waxaa ka mid ahaa ayuu yiri Abuu-Dalxa Al-suudaani oo ku dhintey dagaaladii ka dhacay Soomaaliya muddo sanad ka hor ah.
Mustafa Abu al-Yazid ayaa sheegay in aysan weli suurta gelin in Shabaabka maamulkooda si toos ah loola mideeyo Al-qaacida laakiin waan taageernaa dhankasta, waana iska warqabnaa.
Mar la weydiiyey Shiikh Mustafa Abu al-Yazid sababta ay dilka ugu xukumaan xubnaha isaga baxa Al-qaacida ayuu yiri taasi waa been laakiin qofka naga baxa waa denbiile, sababta oo ah cahdigii uu nala galay ayuu ka baxay.
Mustafa Abu-Al Yasid ayaa hoosta ka xariiqay in xubno badan ay u direen dalka Soomaliya muddooyinkii la soo dhaafey kuwaas oo weli ku sugan gudaha Soomaaliya.
Mustafa Abu al-Yazid waa ninka u sareeya Shabakada Al-qaacida ee Afqaanistaan, waxa uu ku dhashey dalka Masar sanadkii 1955-tii, waxaa muddo sadex sano ah uu ku xirnaa dalka Masar sanadihii sideedamaadkii waxaana lagu eedeeyay in uu lug ku lahaa dilkii Madaxweynihii Masar Anwar Al-sadaat 1981-kii, sanadkii 1988-kii ayuu tegay dalka Afqaanistaan halkaas oo uu ka mid noqdey Mujaahidiintii Carbeed ee dagaalka kula galay dalkii Midowga Soofiyeyti.